State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi attends the 35th ASEAN Summit and related Summits – Ministry of Foreign Affairs
At the end of the ASEAN Summit, Chairman’s Statement of the 35th ASEAN Summit was issued in which the ASEAN Leaders welcomed the outcomes of the 2nd Technical Working Group Meeting held on 29 October 2019 in Nay Pyi Taw and the identification at that Meeting of the prioritized projects to implement the recommendations of the Preliminary Needs Assessment on enhancing capacity of Reception and Transit Centres, strengthening of information dissemination and support to the provision of basic services in Rakhine State as the first step. The ASEAN Leaders supported the implementation of the three points reached at the informal Foreign Ministers’ Meeting among Myanmar, Bangladesh, and China in New York and proposal of the Secretary-General of ASEAN to establish an Ad-Hoc Support Team of the ASEAN Secretariat to focus on implementing the recommendation of the Preliminary Needs Assessment. They reaffirmed their support in providing humanitarian assistance, facilitating the repatriation process, and promoting sustainable development in Rakhine State. They also expressed their continued support for Myanmar’s efforts to bring peace, stability, the rule of law, to promote harmony and reconciliation among the various communities, as well as to ensure sustainable and equitable development in Rakhine State.
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၃၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခဲ့
ပဏာမဆန်းစစ်လေ့လာရေးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်များအရ အခြေခံလိုအပ်ချက် ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးမည့် ယာယီ အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ (Ad Hoc Support Team) တစ်ခု ထားရှိရေးကို အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်များက ကြိုဆို
(၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ကောက်မြို့၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်မှ ၄ ရက်အထိ ကျင်းပသည့် (၃၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယနေ့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ကျင်းပသည့် အာဆီယံ စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် “Empowering ASEAN 4.0” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီး ယင်းနေ့ ညနေပိုင်းတွင် ကျင်းပသည့် (၃၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး (မျက်နှာစုံညီ) နှင့် အာဆီယံနှင့် ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တို့အကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၃၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများ၏ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၊ (၂၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-တရုတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် (၁၆) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-အိန္ဒိယ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတို့သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် (၁၀) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ကုလသမဂ္ဂ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ယင်းနေ့ညနေတွင် အာဆီယံ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (ငြိမ်း) ပရာယုဒ်ချန်အိုချာက တည်ခင်းသည့် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်တွင် (၂၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ အပေါင်းသုံး ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးသည့် အထူးနေ့လယ်စာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ယင်းနေ့ ညနေပိုင်းတွင် (၁၄) ကြိမ်မြောက် အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ (၂၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ဂျပန် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ တတိယအကြိမ်မြောက် ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ (၃၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများ၏ ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားနှင့် (၁၁) ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်-ဂျပန် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး အလုပ်သဘော ညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ထိုင်းနိုင်ငံက ၂၀၂၀ ခုနှစ် အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံထံသို့ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်။
(၃၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် အာဆီယံအသိုက်အဝန်း တည်ဆောက်ရာတွင် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာစေရေး၊ အာဆီယံ၏ ပြင်ပဆက်ဆံရေး၊ အာဆီယံ၏ အနာဂတ်ဦးတည်ချက်စသည့် ကိစ္စရပ်များအပြင် တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးကိစ္စနှင့် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရေးကိစ္စတို့ အပါအဝင် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးအမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌက သိမ်မွေ့ရှုပ်ထွေးသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စအား ဖြေရှင်းရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဆက်လက်အားပေး ထောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နေရပ်စွန့်ခွာသူများအတွက် သင့်လျော်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ် ဖန်တီးပေးနိုင်ရန် ဒေသခံ အသိုက်အဝန်းများကို အကျိုးရှိစေမည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်များနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံချက်များကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံ သက်သောင့်သက်သာရှိသည့် မိတ်ဆွေများနှင့် ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့် အာဆီယံ၏ အခန်းကဏ္ဍကို တိုးမြှင့်သွားသင့်ကြောင်း၊ အာဆီယံ ဆန်းစစ်လေ့လာရေးအဖွဲ့၏ ကနဦးလိုအပ်ချက် ဆန်းစစ်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကို ကူညီပံ့ပိုးမည့် ယာယီအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ (Ad Hoc Support Team) တစ်ခုထားရှိရန် အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အဆိုပြုချက်ကို သဘောတူထောက်ခံကြောင်း ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က မိမိတို့အနေဖြင့် မိတ်ဆွေ အာဆီယံနိုင်ငံအချို့၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို နားလည်ကြောင်း၊ မိမိတို့သည် အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးနှင့် နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိသလို ဆက်လက်ပူးပေါင်းသွားရန် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း၊ နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးအတည်ပြုခဲ့သည့် ဦးစားပေးစီမံချက် (၇) ခုကို ဆောလျင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်သွားမည် ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းအကြံပြုချက်များကို ဆောလျင်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုအဖွဲ့တစ်ခု ထားရှိသင့်သည်ဟု အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် သဘောတူညီထားကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ အသိုက်အဝန်းများအားလုံး၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် မိမိတို့ကို အစဉ်တစိုက် ထောက်ခံအားပေးကြသည့် မိတ်ဆွေများနှင့် နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ဆန္ဒအလျောက် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာဖြင့် ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးရာတွင် မိတ်ဆွေများအနေဖြင့် မိမိတို့ကို ဆက်လက်ကူညီကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးတွင် (၃၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်သည်။ အဆိုပါ ကြေညာချက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အာဆီယံခေါင်းဆောင်များက ပဏာမ ဆန်းစစ်လေ့လာရေးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ပထမအဆင့်အဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဆွေးနွေးအတည်ပြုခဲ့သည့် ဦးစားပေး စီမံချက် (၇) ခုကို ကြိုဆိုကြောင်း၊ အလွတ်သဘော သုံးပွင့်ဆိုင် ဝန်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေး၏ သဘောတူညီချက် (၃) ရပ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကို ထောက်ခံကြောင်း၊ ပဏာမ ဆန်းစစ်လေ့လာရေးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးမည့် အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး၏ ယာယီ အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ (Ad Hoc Support Team) တစ်ခု ထားရှိရန် အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အဆိုပြုချက်ကို ကြိုဆိုကြောင်း၊ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများပေးခြင်း၊ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ် အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးခြင်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အာဆီယံ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုကို ထပ်လောင်းအတည်ပြုကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းများအကြား သဟဇာတဖြစ်ရေးနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတို့အတွက် မြန်မာအစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဆက်လက် ထောက်ခံအားပေးကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
(၃၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများတွင် စက်မှုတော်လှန်ရေး ၄.၀ ဆီသို့ ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံ ကြေညာချက် (ASEAN Declaration on Industrial Transformation to Industry 4.0) ၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ မူဘောင် ကွန်ဗင်းရှင်းညီလာခံ၏ (၂၅) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းမည့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ အာဆီယံ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက် (ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 25th Session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC COP 25)) ၊ ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု ဖြစ်စဉ်တွင် ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံကြေညာချက် (ASEAN Declaration on the Rights of Children in the Context of Migration)၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ် ၂၀၃၀ အတွက် ပညာရေးမိတ်ဖက် တိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ ဗန်ကောက်ကြေညာချက် (Bangkok Declaration on Advancing Partnership in Education for 2030 Agenda for Sustainable Development in ASEAN) ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးစနစ်တွင် ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှု တိုးတက်ရေးနှင့် သွက်လက်သော ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု အရှိန်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံထုတ်ပြန်ချက် (ASEAN Statement on Promotion of Good Governance and Acceleration of an Agile Civil Service inaDigital Economy) ၊ ပေါင်းစည်းဆက်သွယ်မှု အစီအစဉ်များအကြား ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ အာဆီယံအပေါင်းသုံး ခေါင်းဆောင်များ၏ ထုတ်ပြန်ချက် (ASEAN Plus Three Leaders’ Statement on Connecting the Connectivities Initiative) ၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုခင်းများကို နှိမ်နင်းရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ခေါင်းဆောင်များ၏ ထုတ်ပြန်ချက် (East Asia Summit Leaders’ Statement on Cooperation to Combat Transnational Crime) စသည်တို့ အပါအဝင် စာရွက်စာတမ်း (documents) (၄၄) ခုကို ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။